संसद्लाई यसो गर, त्यसो नगर भन्ने डा. केसी को हुन् ? : रामनारायण बिडारी [अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसद रामनारायण बिडारी संसद्मा दिने मन्तव्य प्रस्तुतिका कारण चर्चामा आइरहन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका बिडारी संसद्मा बोल्दा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छन् ।
आफूसँग भएको सहमति अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गर्दै अनशनमा बसेको डा. गोविन्द केसीको मागप्रति बिमति राख्छन्, बिडारी । ‘संसद्लाई यो गर, त्यो गर भनेर निर्देशन दिने डा. केसी को हुन् ?
सरकारी तलब खाने कर्मचारीले संसद्लाई निर्देशन दिन मिल्छ ?’ लोकान्तर शोका लागि दिलनिशानी मगरसँगको कुराकानीमा बिडारीले प्रतिप्रश्न गरे ।
काठमाडौंमा घर भएका सांसदले किन घरभाडा लिएको, सालासाली पिए राखेर पैसा किन खाएको ? संसद्मा बहुमतको दम्भ किन देखाएको ? वाइडबडी विमान घोटाला किन गुपचुप गर्न खोजेको भन्ने प्रश्नमा सांसद बिडारीको जवाफका लागि हेर्नुहोस्, भिडियो :
एमाले महाधिवेशनमा पूर्व माओवादी खेमा सम्मानजनक है...
अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने कोही छैन, अन्य पदमा प्...